Ku takhasusay soo saarida jilaaga wiishka leh khibrad qani ah |
Magaca: Crane Nylon Slider Technology: Cirbadeyn / Dhexdhexaadin Dhexdhexaadin / Nidaamaynta CNC
In mashiinada dhismaha, slider waa ku dhow yahay qayb lagama maarmaan ah. Tusaale ahaan, slider ee taageerada wiishka ee gaari xamuul ah ayaa laga sameeyay naxaas hore. Hadda, ka dib marka la isticmaalo slider MC nylon, nolosha adeegga waxaa lagu kordhiyay 4-5 jeer. MC nylon slider wuxuu leeyahay nolol adeeg dheer wuxuuna ilaalin karaa waxqabadka saliidaynta muddo dheer kadib hal mar oo shidaal lagu shubay. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale leedahay faa'iidooyinka caabbinta saameynta, iska caabinta gariirka, iska caabbinta daalka, dhawaqa hooseeya, miisaanka fudud, isku-dhafka habboon, iyo xirashada iska caabbinta.
Faa'iidooyinka slider naylon slider
1. Waxqabadka dhammaystiran ee heer sare ah, gaar ahaan sifooyinka wanaagsan ee farsamada, caabbinta saameynta ayaa ka wanaagsan tan guud ee thermoplastics, kuwa kale sida iska caabinta kuleylka, iska caabinta heerkulka hooseeya, iska caabinta kiimikada, guryaha qalabka korantada, iwm.,
2. Miisaan khafiif ah oo sahlan in la beddelo. Iska yaree xoogga foosha.
Isticmaalka wiishka naylon slider: qaybaha u adkeysiga u adkeysiga iyo yareynta culeyska fekerka ee mashiinada, qalabka, gawaarida, iwm.
Faahfaahinta baakadaha: Badanaa waxaan isticmaalnaa filimka xumbada iyo sanaadiiqda kartoonada, haddii loo baahdo, baaldiyo alwaax ah ama sanaadiiq alwaax ah ayaa la isticmaali doonaa. Waxyaabaha yaryar waxaa lagu buuxiyaa bacaha is-shaabadaha + kartoonnada. Alaabada waaweyn waxaa lagu buuxiyaa boorsooyin alwaax ah + sanduuqyo alwaax ah.
Hore: tayo sare leh Nylon slider ee nooca mashiinada dhismaha
Xiga: Soosaarka xirfadeed ee qaybaha cirbadeynta baabuurta oo leh tayo la hubo